विद्याको ‘स्टारडम’ एमालेबाटै खत्तम ! | My News Nepal
विद्याको ‘स्टारडम’ एमालेबाटै खत्तम !
काठमाडौं । शीतल निवासबाट एमालेभित्र गुटको राजनीति चलाउँदै आएकी विद्यादेवी भण्डारीको राष्ट्रपतिमा पुनः मनोनयनसँगै विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएका छन् । प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको जोडबलमा दोहोरिन पुगेकी भण्डारीलाई अर्को समूहले मतदान गर्छ वा गर्दैन भनेर आशंका पैदा भएको छ ।
राजपा नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल तथा स्वतन्त्र सांसदहरूको मत पनि वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार भण्डारीलाई पर्ने निश्चित छ । यो हुँदा हुँदै भण्डारीले दुईतिहाइ मतले जित्ने पनि छिन् । तर, यो जित उनका लागि उत्साहको हुने छैन ।
भण्डारीको प्रस्तावकमा सांसद माधवकुमार नेपाल, भीमबहादुर रावल, सुवास नेम्वाङ, ईश्वर पोखरेल, ओनसरी घर्ती, रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल, गोकर्णराज विष्ट, भानुभक्त ढकाल र रवीन्द्र अधिकारी छन् । भण्डारीको पक्षमा एमालेकै उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल समूहले मत नदिने हो कि भनेर विभिन्न अड्कलबाजी भएका छन् । शाक्य र खनालको मतले भण्डारी पराजित हुने छैनन् । तर, त्यो भोट उनका लागि मूल्यवान हुनेछ । यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा खबर छ।
शाक्यलाई ३ नं. प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न नदिन र हराउन शीतलनिवासबाट भण्डारीले शक्ति र पदको दुरुपयोग गरेकी थिइन् । यसबारेमा शाक्यले एमालेको स्थायी समितिको बैठकमा समेत राखेर भण्डारीको गतिविधि नियन्त्रण गर्न माग गरेकी थिइन् । अर्का नेता खनाललाई राष्ट्रपति हुने बाटो छेक्ने पनि उनै भण्डारी हुन् । अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीलाई दवावमा राखेर भण्डारीले राष्ट्रपतिमा दोहोरिन मौका पाएकी छिन् ।
मंगलबार राति बालुवाटारमा बसेको एमालेको स्थायी समितिको बैठक पनि भण्डारीका लागि खासै सुखद् छैन । निर्णय भण्डारीको पक्षमा भए पनि सन्देश उनको पक्षमा छैन । भण्डारी राष्ट्रपतिका लागि सर्वसम्मत हुन सकिनन् । यसकारण भण्डारीका आगामी दिन सहजपूर्ण छैन भन्ने रहेको एमालेका एकजना स्थायी समिति सदस्यले बताए । राष्ट्रपतिमा शाक्य र खनाल मात्रै होइनन् जनजाति नेता सुभाषचन्द्र नेम्वाङले पनि इच्छा देखाएका थिए ।
उपमहासचिव घनश्याम भुषालले भण्डारीलाई उम्मेदवार बनाउन नहुने धारणा राखेका थिए । उनले नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेको बताइएको छ । सचिव योगेश भट्टराईले पनि महिला नै चाहिएको हो भने बरु अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई नै बनाउन सुझाएका थिए । बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल मौन बसेका थिए । विभिन्न विषयमा ओलीसँग असन्तुष्टि जनाए पनि खानलका पक्षमा खुलेनन् । नेता खनालले महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उठेका नेपाललाई सहयोग गर्ने बाचा दिएर अन्तिममा ओलीलाई साथ दिएका थिए । त्यस बेलाको बदला नेपालले अहिले आएर खनालसँग लिएका छन् । उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि मौन नै बसेका छन् ।
स्थायी समितिको बैठकमा शाक्यको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यसपटक संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा मलाई हराउन विद्याजी खुलेरै लाग्नु भयो । तपाईलाई विद्यादेवी भण्डारी नै प्यारो किन छ अध्यक्ष ज्यू ?’ तर, यसपटक अलिक बिचार गरेर मात्रै उम्मेदवार बनाउनु पर्छ भनेर शाक्यले चेतावनी दिएकी थिइन् । एक नेताको भनाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अध्यक्षज्यू, उहाँ (भण्डारी) ६० वर्ष हुँदा पनि, सक्रिय राजनीति आउन सक्नुहुन्छ, यो कुरा तपाईले सोच्नुभएको छ ?’ अन्तिम समयसम्म पनि भण्डारीलाई राष्ट्रपतिमा दोहो¥याउने निर्णयविरुद्ध ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने अडान शाक्यले राखेकी थिइन् ।
कोरोनाबाट स्याङ्जाका एक पुरुषको मृत्यु, नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या २५ पुग्यो